Vaovao - Inona no tombony amin'ny rafitra fitantanana trano fanatobiana RFID?
Inona no tombony amin'ny rafitra fitantanana trano fanatobiana RFID?
Na izany aza, ny zava-misy amin'izao fotoana izao amin'ny vidiny avo sy ny fahombiazan'ny ambany ao amin'ny rohy fanatobiana entana, amin'ny alalan'ny fanadihadiana ny antoko fahatelo lozika mpandraharaha trano fanatobiana entana, orinasa-tompon'ny trano fanatobiana orinasa sy ny mpampiasa trano fanatobiana entana hafa, dia hita fa ny fitantanana trano fanatobiana entana nentim-paharazana manana ireto olana manaraka ireto:
1. Efa hapetraka ao amin’ny trano fanatobiana entana ny entana, ary tsy mbola nalefa ny taratasin’ny trano fanatobiana entana, ka tsy azo apetraka eo no ho eo.
2. Efa ela no lasa ilay fiara mpanatitra. Rehefa avy nojerena ny fanisana dia hita fa mbola tsy ao anaty trano fanatobiana entana ireo entana ireo.
3. Natao tao anaty fitahirizana ny entana, saingy hadinony ny nandrakitra ny toerana fitehirizana na ny toerana fitehirizana diso dia voarakitra an-tsoratra, ary mila antsasaky ny andro vao mahita ny entana.
4. Rehefa mivoaka ny trano fanatobiana entana, ny mpiasa dia mila mihazakazaka miverina any amin'ny trano fanatobiana entana maro mba haka ny entana, ary ny fotoana fiandrasana fiara dia lava.
5. Ny takelaka iray dia andro vitsy monja, noho izany dia tena ambany ny fahombiazany, ary ambany ny fahombiazany, ary misy ny fahadisoana matetika.
6. Be dia be ny vokatra hoavy akaiky misy vokany azo isaina isaky ny alaina ny fanisana, ary lasa resaka poakaty ny fidirana voalohany, mivoaka voalohany.
Ny fisian'ireo olan'ny trano fanatobiana entana etsy ambony dia nisy fiantraikany ratsy teo amin'ny fampandrosoana sy ny fiasan'ny orinasa, ary ilaina ny mamaha sy manatsara haingana ny haavon'ny fitantanana trano fitehirizam-bokatra. Ny fiposahan'ny rafitra fitantanana trano fanatobiana entana RFID dia manome fomba fitantanana trano fitehirizam-bokatra mety kokoa, mahomby ary manan-tsaina.
Noho izany, manoloana ireo olan'ny trano fanatobiana entana etsy ambony, inona no tombony amin'ny rafitra fitantanana trano fanatobiana RFID?
Amin'ny famoahana RFID marika elektronika ho an'ny pallet tsirairay sy ny toerana fitehirizana ao amin'ny trano fanatobiana entana, ary miaraka amin'ny fitaovana manokana isan-karazany, dia afaka mahatsapa ny famantarana mandeha ho azy ny pallet sy ny fampahalalana fitehirizana entana, izay manamora ny mpampiasa hitantana ny entana.
Mandritra izany fotoana izany, amin'ny alàlan'ny UHF RFID tag mamatotra ny entana, dia afaka manavaka tsara ny tena olana fitantanana toy ny batch, modely, vokatra anarana, warehousing fotoana, mpamatsy, sata, sns, ary ny fitantanana sy ny fanaraha-maso dia mifanaraka kokoa amin'ny fitantanana maoderina.
Ny fandraisana asa isan'andro dia azo ampifandraisina ho azy amin'ny fitaovana entin-tanana RFID, ary azonao atao ny mahafantatra ny antsipirihan'ny asa tsy misy rosia taratasy.
Ny angon-drakitra fandraisana dia tsy mila voarakitra an-tsoratra, ary ny rafitra dia manangona sy manisa ho azy mba hahazoana antoka ny fahamarinan'ny angona fandraisana.
Aorian'ny fahatongavan'ny entana ao amin'ny trano fanatobiana entana, ny rafitra dia hanavao ho azy ny habetsaky ny fanisana ao amin'ny trano fanatobiana entana, ary ho vita koa ny antontan-taratasy.
Aorian'ny Rafitra fitantanana trano fanatobiana RFID dia tafiditra amin'ny forklift RFID, ny asa talantalana dia azo atolotra amin'ny forklift RFID ho an'ny famonoana.
Ny forklift RFID dia manara-maso ny pallet ho azy, mampiseho ny fampahalalana momba ny enta-mavesatry ny pallet sy ny fampahalalana momba ny trano fanatobiana entana, manolotra ny toerana fitehirizana entana amin'ny fotoana tena izy, ary mampitombo ny tahiry ao amin'ny talantalana.
Ny rafitra dia hanamafisana ho azy ny lalana mandeha amin'ny picking, tsy mila mandeha an-tongotra sy miverina, dia an-tongotra iray fotsiny vao vita ny fanangonana entana.
Ny forklift RFID dia mijery ny marika pallet RFID mba hanamarina haingana ny fampahalalana momba ny entana mivoaka, ary afaka manao fanamarinana voalohany amin'ny voalohany mba hanatsarana ny fiodinan'ny tahiry.
Rehefa vita ny fivoahana dia ahena ho azy ny fitahirizana mivoaka.
Tsy ilaina ny fandraisana taratasy firaketana an-tsoratra, ary ny sehatra fiasana finday RFID dia afaka manamarina an-tserasera ny receipts an-tserasera.
Tsy ilaina ny firaketana an-tànana ny fampahalalana momba ny angon-drakitra, ary ny rafitra dia manohana ny firaketana an-toerana.
Ny fahamarinan'ny famoriam-bola dia mahatratra ny haavon'ny toerana sy ny haavon'ny pallet, izay manamora ny fampiharana sy ny fanatanterahana ny lisitra; manohana ny fanisana sy ny trano fanatobiana entana miditra sy mivoaka amin'ny fotoana iray ihany.
Miaraka amin'ny fampiasana forklifts RFID, haingana kokoa ny hafainganam-pandehan'ny famoriam-bola, ary ny angon-drakitra momba ny fahasamihafan'ny tahiry dia voafintina ho azy.
Ny fampiharana ny rafi-pitantanana trano fanatobiana entana RFID dia manamora ny fiasan'ny trano fanatobiana entana isan'andro, ary ny angon-drakitra dia voangona ho azy sy nohavaozina, manafoana ny filàna fidirana amin'ny tanana, ka mamorona foibe fitehirizam-bokatra marani-tsaina sy mandeha ho azy ho an'ny orinasa hampihenana ny fandaniana sy hampitombo ny fahombiazany. .